Sawirro: RW Rooble iyo mas’uuliyiin kale oo Gaalkacyo uga qeyb galay aaskii saraakiisha | Somsoon
Home WARAR Sawirro: RW Rooble iyo mas’uuliyiin kale oo Gaalkacyo uga qeyb galay aaskii...
Sawirro: RW Rooble iyo mas’uuliyiin kale oo Gaalkacyo uga qeyb galay aaskii saraakiisha
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ku sugan magaalada Galkacyo ayaa ka qeyb galay aas qaran oo maanta loo sameeyey saraakiishii shalay lagu dilay qaraxii is-miidaaminta ahaa.
“Salaadda Janaasada ayaa waxaa marxuumiinta wadajir ugu dukaday Ra’iisul Wasaaraha , Madaxweynaha Galmudug, Wasiirro ka tirsan dowladda federaalka, Puntland, Galmudug, xildhibaanno heer federal, heer gobol iyo saraakiisha ciidamadda. Waxayna Allah uga baryeen inuu naxariistiisa janno ka waraabiyo guud ahaan dadkii ku dhintay” ayaa lagu yiri war ka soo baxay xafiiska R/wasaare Rooble.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawaa Yuusuf Raage iyo Madaxweynaha Galmudug Qoor Qoor oo goobta aaska ka hadlay ayaa tilmaamay in “cadowga ummadda Soomaaliyeed aan looga hari doonin beegsiga haldoorka bulshada.”
Ra’iisul Wasaare Rooble oo isna goobtii lagu aasay saraakiisha hadal kooban ka jeediyey ayaa Alle uga baryay in uu naxariistii janno ka waraabiyo, ehelkii iyo ummadda Soomaaliyeed ee ay ka bexeenna uu Samir iyo iimaan ka siiyo.
Sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya aysan marna ilaawi doonin halyeeyadii “qaranka ka shahiiday”.
Article horeMalaawi oo ku dhaqaaqday tallaabo ay dowladda Soomaaliya xiriirka ugu jari karto
Article socoda Wafdi uu hor kacayo MW Farmaajo oo goor dhaw u ambabaxay Jabuuti